Wasiirka Shaqada iyo arrimaha Bulshada oo Geneva kusoo bandhigay halka uu marayo barnaamijka daryeelka Bulshada ee DFS – Radio Muqdisho
Wasiirka Shaqada iyo arrimaha Bulshada Soomaaliya, Mudane; Saddiiq Xersi Warfaa,ayaa sheegay in Dowladda federaalku ay dedaallo lixaad leh ugu jirto in si isku mid ah loo gaarsiiyo Bulshada Soomaaliyeed barnaamijka daryeelka Bulshada oo waara.
Mudane; Warfaa oo khudbad ka jeediyay shirka Caalamiga ah ee looga hadlayo arrimaha daryeelka bulshada oo ay soo qaban qaabisay hay’adda shaqaalaha Adduunka ee ILO, kaa oo ka socda magaalada Geneva ee Dalka Switzerland ayaa ku nuux-nuuxsaday juhdiga ay Dowladdu ku bixineyso taabba gelinta barnaamijkan iyo ka Mira dhalintiisa.
“Iyadoo aynu taageero ka heleyno Bah-wadagteenna horumarinta, waxaan billownay qaar ka mid ah mashaariicda horumarinta ee aad muhiimka u ah, si aan u hirgalinno nidaamka daryeelka Bulshada oo waafaqsan xeerka daryeelka Bulshada ee Qaranka, marka laga hadlayo awoodda maaliyadeed, waxaan ku faraxsan-nahay in July 2019-ka -Guddiga fulinta ee hay’adda Lacagta Adduunku (IMF) ay kulmeen si ay u soo gaba-gabeeyaan la tashiga qodobka 4-aad ee ku saabsan Soomaaliya, waxayna ku heshiiyeen in siyaasadaha dhaqaalaha iyo qaab-dhismeedkeeda ee hoosta looga qeexay SMP- Afaraad ay buuxiyeen heerarka siyaasadaha ee la xiriira qorsheynta deynta. “ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka ayaa sheegay in Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha tubtiisa horumarinta Bulshada iyo dhaqaalaha ay horay u muujiyeen in maal-gashiga waaxaha Bulshada, gaar ahaan daryeelka Bulshada iyo Biyaha ay heli doonaan qoondeyn miisaaniyadeed oo ballaaran, ka dib deyn cafinta.
Wuxuu rajo wanagsan ka muujiyay dedaallada socda ee deyn cafinta ee guulaha laga gaaray inay dhammeystirmaan , taas oo uu sheegay inay horseedeyso horumar dhaqaale iyo isku filnaasho uu dalku gaaro.
“Iyadoo la tixraacayo Siyaasaddeena daryeelka Bulshada ee Qaranka, Dowladda Soomaaliya waxaa si buuxda uga go’an inay horumariso hannaan daryeelka Bulsho ee waara ,waxaannu ka faa’iideysan doonnaa dhammaan kheyraadka-yaga oo aannu u adeegsan doonno sidii loo hubin lahaa in la gaaro mabda’a ah ”Cidna inaan laga tagin” iyadoo looga faa’iideynayo marka hore inta nugul.” ayuu yiri Wasiirku.
Shirkan ayaa waxaa ka qeybgalaya Wasiirro, wakiillo iyo hoggaamiyeyaasha Ururro caalami ah, iyadoo Soomaaliya ay ku matalayaan wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Shaqada iyo arrimaha Bulshada.